ikhathalogi yamagiya e-flender gearbox, i-flender gearbox hand, i-flender gearbox supplier e-india, fleeve gearbox repail, flender gearbox South Africa, siemens gearbox manual, siemens gearbox manual
Ama-gear Helical Gearboxes
Ibhokisi leJear Duty gear, iBevel Gearbox, i-gear speed minimator, i-Transfer gear units, i-gearbox eyi-hollow shaft eqinile, amagiya anophephela emhlane, amagiya egiya lezimboni i-Industrial Helical, Helical bevel Gear Units
@Type Designation (ngaphandle kwemoto)
P: P uchungechunge lwejubane lokunciphisa ijubane lokunciphisa ijubane
3: Cha. Zezigaba, 1,2,3,4.
S: Indlela yokuphuma. Sha-S-Solid shaft, i-H-hollow shaft, i-D-Hollow shaft ene-shrink disk.
H: Ukukhwela indlela, i-H-Horizontal, i-M-Horizontal ngaphandle kwezinyawo, i-V-Vertical
8: Inombolo eyimodeli ye-gearbox
80: Isilinganiso sokudlula
A: Indlela yokwakha eyakhiwe
Ama-sogears athayipha ama-gearbox we-Flender ahlinzeka ngama-turbo parallel shafts kanye nama-gear amayunithi aqukethe ama-motors kagesi noma ama-air motors nabanye. Ngamazinga wethu wokukhiqiza nokulawula ngokunemba, ibhokisi ngalinye lamagiya liyazuza ezinhlelweni eziningi ezifana nosimende, izimayini, ama-conveyor, ukwelashwa kwamanzi, imboni yamaphepha njll. Sekuyiminyaka engaphezu kwemihlanu sithathe izintambo kwa-Siemens AG, FLENDER AG. Ama-gearbox kaGenerator angasetshenziselwa ukukhiqiza ugesi oshibhile. Zisetshenziswa futhi ngezinjini zikadizili ezinejubane eliphansi futhi zingasetshenziswa.
Ku-Flender gearbox incazelo:
ziyi-Hbox ephezulu yamandla egiya lezimboni (amandla aphezulu ne-torque ephezulu)
1. I-gearbox ejwayelekile ye-HB ejwayelekile yamukela ukwakheka komzimba webhokisi lokudonsa, indawo enkulu yekhabhathi nendawo enkulu fan, igiya le-cylindrical kanye ne-spiral bevel gear. Inqubo yokugaya esezingeni eliphezulu yamukelwa ukwenza izinga lokushisa likhuphuke, ukuncishiswa komsindo nokusebenza okuthembekile komshini wonke. Ucansi luyathuthuka namandla okudlulisa ayanda.
2. Ibhokisi legiya lezimboni lamukela uhlelo lokuklama indawo yonke ukubona izindlu ezivamile zokusebenzisa shaft parallel kanye shaft orthogonal. Izinhlobo zezingxenye ziyancishiswa futhi imininingwane namamodeli ziyanda.
I-3, ibhokisi legiya linezinhlobo ezi-3 kuya kwezingu-26 ezichaziwe, inani lezinqubo zokudlulisela zokunciphisa lingu-1 kuye ku-4, kanti isilinganiso sejubane singu-1.25 kuya ku-450.
4. Indlela yokufaka: ukufakwa kwesisekelo, ukufakwa komgodi ongenamkhawulo, ukufakwa kwesisekelo se-swing, nokufakwa kwengalo ye-torque.
5. Imodi yokufaka: i-motor uxhumano lwe-flange nokufakwa komgodi.
6. Imodi yokuphuma: shaft eqinile enokhiye wefulethi, ishebe elimboziwe elinokhiye wefulethi, ishebe elimboze ukugcwala ngokuhlanganisa okuhlanganisiwe, ishebe elineholide eline-spline integrated, shaft eqinile enomugqa ohlanganisiwe nowokuqina okuhlanganisiwe ne-flange kuhlangene.
I-7, ingafakelwa i-backstop ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Kuhlanganiswe uchungechunge lwe-R ne-K ukuthola isilinganiso esisheshayo sejubane.
Isilinganiso sobubanzi besilinganiso: H uchungechunge 1.25 ~ 450, B uchungechunge 5 ~ 400
Ububanzi be-Torque: H uchungechunge 2 ~ 900 kNm, B uchungechunge ngo-5.8 ~ 900 kNm
Ibanga lamandla: H uchungechunge 4 ~ 5000 kW, B uchungechunge 2.8 ~ 3000kW
Ibanga lamandla: Phezulu kuye ku-4800KW
Ijubane lokukhipha (r / imizuzu): 01- 1200
Ukukhishwa kweTorque (NM): Okuphezulu kuya ku-952000N.M
Indlela yokuphuma: shaft Hollow ngokuxhuma okhiye, idiski yokudonsa, ebunjiwe, isheya eqinile njll.
Idizayini eyingqayizivele esezingeni elilula yokukhiqiza izwe, isitoko esiphansi, isikhathi esifushane sokulethwa.
Ukunikeza: China ejwayelekile. Kepha i-SKF, FAG, NSK, TIMKEN, NTN, KOYO, C&U iyatholakala uma kunesidingo
I-torque enkulu yokukhipha, ukuqala okuhle okubushelelezi, ukusebenza kahle kakhulu, imijikelezo yempilo ende, ngokuqondile nangokuma mpo
Ukuhlanzeka okuphezulu kwe-alloy iron gear, ukumelana okuqinile kokuthuthumela, amagiya wephrofayili komhlaba kuthuthukisa umthamo womthwalo, ukusebenza kokupholisa kanye nokwehlisa umsindo.
Isigaxa sokukhipha shaft okuyingxenye sisebenzisa uphawu oluphindwe kabili lwamafutha ngokuqinile ukumelana okuvuzayo kwamafutha.Ukubopha uphawu okuthembekile futhi kusebenza kabanzi embonini.
Ukuhlanzeka okuphezulu kwengxube yensimbi yegiya, ukumelana okuqinile kokushaqeka, amagiya womhlaba wephrofayili athuthukisa umthamo wokulayisha, ukupholisa nomsindo ukwehlisa ukusebenza, ukudluliswa okuzinzile. Ama-gearbox ethu eCompact angamabhokisi wamagiya asezingeni eliphakeme amadrayivu ajwayelekile. Imoto kagesi ihlanganiswe no-gearbox kuyunithi elilodwa. Siyinsizakalo egcwele, yokulungisa konke nokwakha kabusha esebenza izidingo zakho zamabhokisi wamagiya amasha ashintshelwe kuFlender Gearbox yakho endala noma abadinga ukulungiswa nokulungiselelwa kwe-Hard Chrome Plating Services.
Kusetshenziswa cishe iminyaka engama-30 yobuchwepheshe bobuchwepheshe obudidiyelwe be-gear, ukuhanjiswa kwe-Sogears pwoer kungasebenza, kulungise futhi kuthuthukise noma yiluphi uphawu lwe-gearbox kufaka phakathi i-Flender brand. Sinesipiliyoni samashumi eminyaka ekulungisweni kwama-gearbox wohlobo lweFlender kumakhasimende asezimbonini nasolwandle emhlabeni jikelele. futhi besilokhu sishesha kakhulu, isevisi ephelele, onguchwepheshe emhlabeni wonke ekulungisweni kohlobo lwe-flender gearbox wamaFlender gearboxes.
• Ama-Conveyors nemishini yokudla • imishini yokuhamba
• Ama-Mixers • Ijazi & Izimayini • Izimila zezinkukhu • Izinsiza kusebenza zokwakha
• Amaphepha wephepha • Ukuphinda kusetshenziswelwe kabusha Imishini • I-Rotary feeder • Ugesi namandla
• Ukuphakamisa, ukuphakamisa • Isikhumulo semikhumbi nokwakhiwa kwemikhumbi • Usimende nezinto ezibonakalayo • Amandla kagesi namandla
• Amaminerali wamalahle • Ukwelashwa kwamanzi amdaka • Imboni yamakhemikhali
1. Yiba neminyaka eminingi yolwazi lokukhiqiza.
2. Singumenzi, sinelungelo elizimele lokuthumela, intengo kangcono, lingalawula ikhwalithi nesikhathi sokulethwa.
3. Onjiniyela abangochwepheshe bokuqamba kwakho, ukudweba, baqinisekise ikhwalithi yokukhiqiza uma imikhiqizo engeyona eyejwayelekile.
4. Izithombe nezamafilimu enqubo yokwenza umsebenzi wokukhiqiza uzokubikwa kuwe.
5. Isikhathi sewaranti yizinyanga eziyi-12.
Singama-Industrial Gearbox Specialists avela e-China, ukuthengiswa kobubanzi obugcwele bamaGearbox njengeFlender. Sinabasebenzi Bokuthengisa bawo wonke umhlaba ngenzuzo enhle ngemuva kwensizakalo yokuthengisa. Ukuhlakazwa kwamabhokisi wethu wamagear kuhlangana neFlender, sekuyisikhathi eside kusetshenziswa izicelo zezimboni nezasolwandle, isib. Embonini yamakhemikhali, ekwakhiweni kwemikhumbi kanye nasemakethe yamandla omoya. Ama-Stork Gears kanye nezinyembezi eziningi zamashumi eminyaka wesipiliyoni ekulungisweni kwama-gearbox weFlender wezimboni nolwandle.
Zonke amamodeli zalolu hlobo lwethu:
Zonke amamodeli zalolu hlobo lwe-Flender's: